SomaliTalk.com » 2012 » November » 25
Home » Archive Maalinta November 25th, 2012
“Nimaan Dhul Marin, Dhaayo Maleh” HORDHAC/GOGOL-DHIG Allaah ayaa mahad oo idil iska leh, nabadgalyo iyo naxariisina Nabigeena Muxammad ah korkiisa Allaha yeelo. Intaa kabacdi, Akristaha sharafta badanoow, safarkeygii aan dhawaan wadankeenii hooyo ku tagay (August 6, 2012-illaa-September 6, 2012). Waxaan ku so booqdey qeeybo ka mid ah gobollada dalka, oo eey ku jiraan gobollada waqooyi ee Soomaaliya-Caalamiyan-,ee...
Ma jirto Ummad samaysay horumar la hareer sima ummadaha kale aqoon la’aan! Shakina kuma jiro in jiritaanka shacuubtuna uu ku dhisan yahay aqoon awoodiisuna ay san jirayn aqoon la aan ama mid dul saar ah . Awooddu waxay imaaddaa marka la helo wax-aqoon dhisa , nabaddu waxay jiri kartaa marka tacliin leeyihiin dadka meel ku wada nool , caafimaadku suura gal ma noqon karo aqoon la’aan...